Ipob: Etu ọgụ dara n’etiti ndị uweojii na Ipob siri mee - BBC News Ìgbò
Nkenke aha onyonyo Ndị uweojii nọ n'Anambra kwuru ndị otu IPOB were mma merụọ ndị otu ha ahụ
BBC Igbo achọpụtala na otu onye uweojii nwụrụ na ọgbaghara mere n'etiti ndị uweojii na ndị otu Ipob n'ahịa Nkwọ Nnewi dị na Nnewi, Anambara steeti.Ọgbaghara a mere n'ụbọchị Nọvemba 23, 2018 oge igwe mmadụ bụ ndị otu Indigenous Peoples of Biafra (Ipob) pụtara na-eme ngagharịiwe maka ntuliaka 2019.
BBC Igbo chọpụtara na ikuku egwu ka na-eku na Nkwọ Nnewi ugbua.Oge BBC batara ahịa ahụ ụbọchị Satode, ụgbọala ndị uweojii a gbara ọkụ ka kwụsa.
Ndị BBC gbara ajụjụ ọnụ kwuru na ọ bụ ndị Ipob gbara ụgbọala ahụ ọkụ.
Nkenke aha onyonyo Ụgbọala Ipob gbara ọkụ
Ụfọdụ ndị hụrụ mgbe o mere kwuru na ọ bụ ka ndị uweojii mere ka ha chụsasịa ndị Ipob ka okwu dara.Otu onye nọ mgbe ihe a mere gwara BBC sị,"Ndị uwejii bidoro ịgbali egbe elu, mana ndị Ipob agbaghị ọsọ, ha bara ndị uweojii a ọgụ."
Image copyright Nwonwu Nwabueze
Onye ọzọ hụrụ ọgbaghara ahụ kwukwara na tupu okwu daa, ndị Ipob na-agara onwe ha na-achọghị mmadụ okwu.Ha kwukwara na ha ahụghị ngwaọgụ n'aka ha na mbụ.
Akụkọ ndị uweojii
Ndị uweojii BBC gbara ajụjụ ọnụ kwuru na ọ bụ eziokwu na onye otu ha nwụrụ, mana akụkọ na ọ bụ ha chọrọ Ipob okwu abụghị eziokwu.
N'ime ozi ha zịpuru na Twitter, ndị uweojii dere na ha agaghị ekwe ka onye ọbụla jiri okwu ọjọọ kewaa ala Naịjirịa.
Otu onye uweojii achọghị ka aha ya pụta n'akụkọ a gwara BBC na: "Ọrụ anyị abụghị ntisa obodo. Ọrụ anyị bụ ịhụ na o nweghị ihe ọbụla ga-eme ka obodo chara ọkụ."
"Ọ bụ ka anyị na-eme ka ndị Ipob mata na anyị bịara n'udo ka ha bara anyị ọgụ,"
Onye uweojii a gakwara n'ihu jụọ ma ọnwụ mmadụ ọ bụ ihe e ji eme akaja?"Onye e gburu nwere nwunye, nwe ụmụaka. Ọ bụ mmadụ. Ọ bụghị ihe eji achị ọchị."
Ipob sị na ha egbughị mmadụ
Ọnụ na-ekwuru Ipob bụ Emma Powerful gwara BBC Igbo n'elu ekwentị na o nweghị onye uweojii nwụrụ n'aka ndị otu ha n'ime ọgbaghara dara na Nnewi.
Powerful sị; "Gọọmentị Naịjirịa na-achọ ụzọ ọbụla a ga-eji metọọ aha Ipob makana a mara na Ipob bụ otu udo."
"Ihe anyị mere ụbọchị ahụ bụ ịdọ ndị Igbo aka na ntị maka ntuliaka 2019".
"Gwa anyị aha onye ahụ nwuru makana anyị mara na onye ahụ abụghị onye uweojii, ọ bụ ndị uweojii ma onye ndị a bụ."
N'otu aka ahụ, Ụkọchukwu Peace bụ otu n'ime ndị na-agbasa ozi otu Ipob agwaala BBC Igbo na ihe mere ha jiri mee ngaghariiwe ụbọchị Fraide bụ maka ị saa anya Ndigbo na mmiri maka ntuliaka 2019.
Peace kwusiri ike na Ipob jiri ohere a were dọọ Ndigbo aka na ntị na ihe ga-adị ha mma abụghị ka nwafọ bụrụ onyeisiala maọbụ osote onyeisiala Naịjirịa.
Media captionIhe bụ iwe anyị taa - Ụkọchukwu Peace
Ndị ihe mere n'ọgbaghara a
BBC Igbo chọpụtara na mmadụ dịka CSP Babalola Adewunyi, ASP Michael Duru na Inspector Akinbami Olaniyi merụrụ nnukwu ahụ n'ọgbaghara ahụ.Inspector Olaniyi bụ onye mechara nwụọ n'ụlọọgwụ.
BBC Igbo hụrụ ụgbọala ndị uweojii ọbara juru n'ime ya na ọdọ uweojii nke a kpọrọ "Area Command" dị nso n'ebe mkpamkpa ahụ kpara. Otu onye uweojii gwara BBC na ọ bụ ụgbọala ahụ ka ha jị ga bute ndị otu ha emerụrụ ahụ."Ụgbọala nwere mberede okporoụzọ ka e bu ndị na-agbaga ụlọọgwụ.
"Ndị otu anyị nwara ike ha mana onye otu anyị nwụrụ n'ụlọọgwụ."
Ụgbọala ọzọ akụrịsịrị nọkwa ebe ahụ. Nke mere na ọ bụ ụgbọala atọ ka ọgbaghara a metụtara.
Akụkọ ga-amasi gị
Lekwa ụzọ ise ihe wuru ewu na soshal midịa metụtara ụmụ Naịjirịa
Ohaneze Ndigbo nara ego iji kwado Atiku - Joe Igbokwe
Vidio May 30: IPOB adaghị iwu